Myanmar Website Creator - Your best web design, web hosting partner in Myanmar
Myanmar Website Creator ဆိုသည်မှာ....
ကျွန်ုပ်တို့၏ web design နှင့် web hosting အင်္ဂါရပ်များ
နှစ်ဆယ့်တစ်ရာစုတွင် Website(homepage) နှင့် email တို့သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာများဖြစ်လာကြသည်။ Website (homepage)တစ်ခုသည် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိ လူအားလုံးဆီသို့ သတင်းအချက်အလက်များ ပေးပို့ရာတွင်ကူညီနိုင်ပြီး ကြီးမားသည့်စီးပွားရေး(လုပ်ငန်း) အခွင့်အလမ်းများ ရရှိစေနိုင် ပါသည်။ သင့်ကုမ္ပဏီ၏ ကိုယ်ပိုင်ဒိုမိန်း(domain) ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော email address ကိုသုံးခြင်းဖြင့် သင့်လုပ်ငန်းအပေါ်ယုံကြည်မှုနှင့် သင့်လုပ်ငန်း၏ အခြေအနေကို မြင့်မားစေပါသည်။ (Website တစ်ခုရှိခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများကိုကြည့်ရန်)
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ကုမ္ပဏီ၊အဖွဲ့အစည်းများ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျယ်ပြန့်လာစေရန် Myanmar Website Creator မှ အောက်ပါဝန်ဆောင်မှုများထည့်သွင်းပေးထားပါသည်-
Web design ( homepage ပြုလုပ်ခြင်း)
Web hosting (website ဖန်တီးခြင်း)
လုပ်ငန်းအတွက် အင်တာနက် အသုံးချတတ်စေရန် အကြံပေးခြင်းဝန်ဆောင်မှု (ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပေးခြင်းဝန်ဆောင်မှုအားကြည့်ရန်)
မြန်မာကုမ္ပဏီများကို ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးမြင့်မားသော IT နည်းပညာဖြင့် ကူညီပေးရန်
ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်အားဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် တဖက်တလမ်းမှ ကူညီဖြည့်ဆည်းပေးရန်။
User/visitor and business oriented
Website (hompage) ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ သင်တို့၏ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၊လှုပ်ရှားမှုများ အကြာင်းကို လူအားလုံးကသိရှိခွင့် ပြုနိုင်ရန်ဖြစ်သည်ဟု Myanmar Website Creator ကထင်မြင်ယူဆပါသည်။ထို့ကြောင့် သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် Website (hompage) ကတဖက်တလမ်းမှ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။ သင့်လုပ်ငန်းအောင်မြင်စေရန်အတွက်လက်တွေ့ကျတဲ့အဖြေကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးနိုင်ပါသည်။
Myanmar Website Creatorမှ- သင့်လုပ်ငန်းအတွက် အင်တာနက်ကိုအကျိုးရှိစွာ အသုံးချတတ်စေရန် အကြံပေးခြင်း။ Hompage များကို ဒီဇိုင်းဆွဲထုတ်ပြီး ၎င်း တို့ကို website များဖြစ်လာစေရန် server ပေါ်သို့တင်ပေးခြင်း (Web Hosting) သို့မှသာ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိ လူအားလုံးက သင့် website ကိုကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ပိုင် domain နှင့် email address များအတွက်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။ (e.g. name@domain).
Myanmar Website Creator ကိုစတင်တည်ထောင်သူသည် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ဒေါက်တာဘွဲ့ရယူ ခဲ့ပြီး software integrator အဖြစ်လည်းကောင်း၊ Electronic Makerအဖြစ်လည်းကောင်း ဂျပန်နိုင်ငံတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ထို့ကြာင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နည်းပညာနှင့်အရည်အသွေး မှာ ဂျပန်နိုင်ငံ၏စံချိန်အတိုင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ customers များထံမှလိုအပ်သော သတင်းအချက်အလက် သေချာစွာ ရယူနေပါသည်။(ကျွန်ုပ်တို့၏ Policy). website များပြုလုပ်ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဂျပန်နိုင်ငံရှိ မြန်နှုန်းမြင့်backbone ပါရှိသော high-end-server များကိုသာအသုံးပြုသည်။ (အသေးစိတ်ကြည့်ရှုရန် )
Search Engine Optimization ဆိုသည်မှာ Websites များကို အင်တာနက်တွင် ရှာဖွေသောအခါ သင်၏ website ကို အပ်ါဆုံးတွင်မြင်သာစေရန် လုပ်ပေးသော နည်းပညာဖြစ်သည်။ Myanmar Website Creator သည် ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်တွင်သာမကပဲ website ကိုလွှင့်တင်ပြီးသည့် အချိန်တွင်လည်း SEO ကို ဂရုတစိုက်ပြုလုပ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ၏ ဈေးနှုန်းများမှာ(web ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း၊homepage ပြုလုပ်ခြင်း၊website ဖန်တီးခြင်း၊website ကို server ပေါ်သို့တင်ပေးခြင်း) အများနည်းတူပင်ဖြစ်သည်။ သင်သည် ငွေသုံးစွဲမှုနည်းနည်းဖြင့် ကြီးမားသော စွမ်းဆောင်ရည် (အကျိုးကျေးဇူး) ကိုရနိုင်ပါသည်။ ( Web design နှင့် Web hosting တို့၏ ကျသင့်ငွေကိုကြည့်ရန်)သင်တို့၏ကုန်ကျမှုစရိတ်ကို လျော့ကျစေရန် promotion များလည်း ပြုလုပ်ထားပါသည် (အသေးစိတ်ကြည့်ရှုရန် )
ထုတ်လုပ်သည့်အဆင့် (web ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း နှင့် homepage ပြုလုပ်ခြင်း)တွင် homepage ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ပေးသည်သာမက အင်တာနက်မှတဆင့် လုပ်ငန်းချဲ့ထွင် နိုင်မည့်အသုံးဝင်သည့် အကြံပြုချက်များဖြင့်လည်းဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။(ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပေးခြင်းဝန်ဆောင်မှုအား အသေးစိတ်ကြည့်ရှုရန် ).
ကျွန်ုပ်တို့၏ website လွှင့်တင်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုတွင်လည်း အပြည့်အဝထောက်ပံ့မှုကို ပြုလုပ်ပေးလျှက်ရှိပါသည်(ကျွန်ုပ်တို့၏ Web hosting ဝန်ဆောင်မှုအား အသေးစိတ်ကြည့်ရှုရန် )
All in One Service ဆိုသည်မှာ ပြီးပြည့်စုံစွာတိုးမြှင့်ထားသော ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပြီး Myanmar Website Creator မှ Homepages ပြုလုပ်ခြင်း၊website အားserver ပေါ်တင်ပေးခြင်း(web hosting) ဝန်ဆောင်မှုများအပြင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုကိုပါပြုလုပ်ပေးပါသည်။
All in One Service တွင်-Homepage Producing (web design) နှင့် Web Hosting ဟူ၍ နှစ်မျိုးပါဝင်သည်။ အသေးစိတ်ကြည့်ရှုရန်
အကယ်၍ သင်သည်homepage တစ်ခုသာပြုလုပ်လိုပြီး web server ပေါ်တင်ခြင်းကိုမူ သင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်မည် ဆိုပါကလည်း Myanmar Website Creator မှ ၀မ်းမြောက်ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်
Search Engine Optimization(SEO) ဆိုသည်မှာ Websites များကို အင်တာနက်တွင် ရှာဖွေသောအခါ သင်၏ website ကို အပ်ါဆုံးတွင်မြင်သာစေရန် လုပ်ပေးသော နည်းပညာဖြစ်သည်။
ယခုခေတ်တွင် internet အသုံးပြုသူများသည် website များကို search engine(google,yahoo) များအသုံးပြု၍ရှာဖွေကြသည်။ အသေးစိတ်ကြည့်ရှုရန်
Myanmar Website Creator မှ computer networking service ကိုလည်း ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါပြီ- ကြိုးဖြင့်(သို့)ကြိုးမဲ့ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် အင်တာနက်ကိုမျှဝေအသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊
ကြိုးဖြင့်(သို့)ကြိုးမဲ့ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် file/printer servers ကို မျှဝေအသုံးပြုနိုင်ခြင်း ၊ အသေးစိတ်ကြည့်ရှုရန်
၁.email account တစ်ခုလျှင် 7GB ထိတိုးမြှင့်ပေးခြင်း ၊
၂.မြန်မာဘာသာစကားဖြင့် Email လက်ခံရယူနိုင်ခြင်း၊
၃. မြန်မာဘာသာစကားဖြင့် Email ပေးပို့နိုင်ခြင်း၊
၄.Web mail- မည်သည့်နေရာတွင်မဆို website အသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊ email အသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊